About us - Shijiazhuang Winclan Imishini Equipment Co., Ltd.
I-Shijiazhuang Winclan Machinery Equipment Co., Ltd. Umkhiqizo wethu omkhulu ufaka iphampu ehlukahlukene. Amaphampu ethu asetshenziswa kakhulu ekuvikelweni kwemvelo, ezimayini, amalahle, izitshalo zamandla ezishisayo, uphethiloli, amakhemikhali, ukwelashwa kwendle, izinhlobo zamaphrojekthi wokonga amanzi, ukuchelela epulazini, ukwakhiwa, njll. Ngesikhathi esifanayo, nathi sibandakanyeka kuma-valve iziqalo nezingxenye zokupompa. Ngobubanzi obuhlukahlukene, ikhwalithi enhle, amanani entengo afanele nemiklamo yesitayela, imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu kukaphethiloli, amakhemikhali, ezokwelapha nezinye izimboni. Imikhiqizo yethu yaziwa kabanzi futhi ithenjiwe ngabasebenzisi futhi ingahlangabezana nezidingo eziqhubekayo zokushintsha ezomnotho nezenhlalo siyakholelwa ukuthi ikhwalithi enhle kanye nensizakalo enhle kakhulu impilo yethu, Samukela ngobuqotho bonke abangane baxhumana nathi! Ikusasa elihle likhona.
sineminyaka engaphezu kwengu-20 yokukhiqiza.Ithimba lethu liqukethe ichibi lomhlaba wonke labantu abazinikele kakhulu abasebenza ndawonye ukuqinisekisa impumelelo yamakhasimende ethu. Abantu lapha bonke bahlome ngobungcweti obuvelele, ukuzibophezela okuphezulu kanye nomfutho oqinile wokwenza inqubekela phambili enenzuzo, ukufinyelela ukuphakama okusha enkonzweni nokuletha imiphumela yangempela.
I-Shijiazhuang Winclan Machinery Equipment Co., Ltd. Sinamathela kumgomo webhizinisi we "Amazwana afanelekayo avela kumkhiqizo osezingeni eliphakeme nensizakalo", futhi ngaleyo ndlela sinikezela ngensizakalo yenqubo ephelele kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ukuthuthukisa, ukukhiqiza, ukufaka nokufaka ngemuva kokuthengisa yamakhasimende anamasu ekilasi lokuqala imikhiqizo esezingeni eliphezulu. Inkampani yethu iklonyeliswe ngesihloko esithi "Umkhiqizo Othembekile Nomhlinzeki Wensizakalo Othembekile" ngabasebenzisi abaningi. Siphinde siqhubeke nokuthuthuka ngesisekelo sokuphatha okuhle kakhulu nokuthuthuka okuthuthukile ukuze silethe imishini yethu ezimakethe ezifuywayo nezaphesheya kwezilwandle.Sibheke phambili ngobuqotho ekubambisaneni kwakho ngokuzayo futhi sikwamukela ngokufudumele ukufika kwakho ukwakha ikusasa lethu elijwayelekile elihle.